Ousmane Dembele Oo Ugu Danbeyn U Guuray Guri Qaali Ah Oo U Dhow Camp Nou Isagoo Saldhiganaya Noloshiisa Cusub Ee Barcelona - Laacib.net
Ousmane Dembele Oo Ugu Danbeyn U Guuray Guri Qaali Ah Oo U Dhow Camp Nou Isagoo Saldhiganaya Noloshiisa Cusub Ee Barcelona
Weeraryahanka Faransiiska ee kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa u guuray guri cusub ka dib seddex bilood uu deganaa huteelka Juan Carlos I ee magaalada Barcelona, isagoo bilaabaya inuu saldhigto noloshiisa cusub ee dalka Spain.
Weeraryahankii hore ee Borussia Dortmund oo dhaawac ka soo kabsanaya ayaa guri raaxo oo seddex dabaq ka kooban waxa uu ka kireystay meel u dhow garoonka kooxdiisa ee Camp Nou, sida ay sheegtay jariirada Catalan ka soo baxda ee Sport.
Guriga uu kireystay ayaa la dhisan sannadii 2008, waxaana uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisu yahay 750 mitir oo laba jibaaran. Waxa uu guriga leeyahay shan qol jiif ah iyo barkad lagu daabasho oo la koontarooli karo heerkulkeeda, waxaa guriga uu leeyahay garaash la dhigan karo afar gaari, wiish iyo xitaa tiyaatar uu ka daawan karo musalsalada uu jecel yahay oo uu ku jiro Narcos sida uu dhawaan qirtay.
Qiimaha uu ku kireystay gurigaan ayaa 15 kun euro bishii, waana lacag aad u badan, laakiin lacag badan uma ahan xiddiga ugu qaalisan taariikhda kooxda Barcelona kaasoo laga soo bixiyay 105 milyan euro iyo lacago kale oo dheeri ah oo ku xirnaan doona qaab ciyaareedkiisa iyo koobabka uu la qaaday Blaugrana.
Dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in Dembele uu ka soo hormarayo waqtigii loo qorsheeyay inuu ka soo kabsado qaliinkii lagu sameeyay 19kii bishii September islamarkaana uu taam u noqon karo kulanka El Clasico ee la ciyaarayo dhamaadka bisha December.
Dhakhtarkii qaliinka ku sameeyay oo la yiraahdo Dr Sakari Orava ayaa wareysi uu dhawaan siiyay idaacada Catalonia ka soo baxda ee SER Radio waxa uu kaga hadlay xaalada da’ yarka reer France.
Markii Dr Sakari Orava ayaa markii la waydiiyay haddii Dembele uu ciyaari doono kulanka El Clasico-da waxa uu ku jawaabay: “Waa suurtogal. Kaliya waa suurtogal, anigu taas ma damaanad qaadi karo. Waxa uu markale dib u bilaban doonaa kubabd ku shaqaynta badhtamaha Nevember”. Waana marka la ogaan karo sida uu noqonayo wajiga cusub ee ka soo kabsashada Dembele.
Intaa kadib Dr Sakari Orava ayaa sharaxay in haddii uu Dembele hore u soo laabto ay jiri karto halis balse ayna ahayn mid badan wuxuuna yidhi; “Halistu ma aha mid saraysa, isagu waa wiil da’yar ah, si deg deg ah oo sax ah ayuu dhaawucu u daawoobay inta uu sida sahlan u qaato ilaa December, wax walba sida saxda ah ayay u socon doonaan”.